Thwebula 9Apps 3.0.1.8 – Vessoft
9Apps – a isofthiwe ukulanda izicelo ahlukahlukene kanye imidlalo kwisevisi 9Apps. Isofthiwe uhlukaniswe izigaba eziningana eziyinhloko imikhiqizo engama zihlelwe zaba izinhlobo eziningi ezahlukene. 9Apps ikuvumela ukulanda izicelo futhi ubuyekeze kubo kuya enguqulweni yakamuva in an mode othomathikhi. Isofthiwe ubonisa usayizi wefayela, izidingo okulandwayo, ukukala kanye incazelo eningiliziwe isicelo. Futhi 9Apps ukhetha futhi itusa izicelo ezifanayo, kusekelwe ohlwini software efakwe kudivayisi yomsebenzisi.
Ukwengeza avamile kwemikhiqizo emisha zisetshenziselwe ukuba ngezamaphoyisa
incazelo qualitative kwemikhiqizo
izibuyekezo Isicelo in an mode othomathikhi
Amazwana on 9Apps:
9Apps Ahlobene software:
English, Українська, Deutsch, Русский... BBM 2.13.0.26